संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन लागेपछि पौडेलपक्षद्धारा विवाद
काठमाडौं ,१० असोज। सरकारले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चारसंघीय गठबन्धनसँगको परामर्शमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन लागेपछि सत्तारुढ कांग्रेसभित्रै विवाद चर्किएको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले पार्टीमा सामान्य परामर्शसमेत नगरी सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकलाई अहित हुने गरी संविधान संशोधनमा सहमति जनाएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ । पौडेल पक्षले आइतबार आफू पक्षधर बैठक नै […]
Posted in एक्सक्लुसिभ समाचार,पत्रपत्रीकाबाट,मुख्य समाचार Read More »
भारत भ्रमण, सरकारको काम कार्वाही र भुकम्पपीडितबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड के भन्छन ?
भारत भ्रमणबारे- पहिलोपटक भारत जाँदा संविधान र शान्ति प्रक्रिया पुरा भएको थिएन । तर, अहिले भारत भ्रमण जाँदा संविधान र शान्ति प्रक्रिया सापेक्षित रुमा पूर्णतामा थियो । यसपटक भारत भ्रमणमा धेरै लिस्ट थिएन । अहिलेको मेरो भ्रमणको मूख्य उद्धेश्य विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गराउनु थियो, यसमा भ्रमण सफल र फलदायी भएको छ । भ्रमणले दुई देशबीचको […]
‘हरियो प्लेट’ सम्वन्धी सरकारी निर्णयको विरोधमा पर्यटक यातायात व्यवसायी
काठमाडौँ , ८ असोज । पर्यटक यातायात व्यवसायीलाई मर्का पर्ने गरी सरकारले नयाँ नियम ल्याउन लागेको भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् ।नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी सङ्घको १३औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा बोल्ने अधिकांश व्यवसायीले ‘हरियो प्लेट’का सवारीमा विदेशीलाई मात्र बोक्न पाइने भन्ने नियमले मुलुकको पर्यटन व्यवसाय धराशायी बन्ने खतरा औँल्याए । पछिल्लो समय यातायात व्यवस्था विभागले […]
जम्बो केन्द्रीय समितिबारे के निर्णय लिंदैछ माओवादी केन्द्रले ?
काठमाडौं , ८ असोज । नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको महाधिवेशन आयोजक समितिलाई व्यवसथापन गने की आका घटाउने भन्ने बारे वहस शुरु गरेको छ । केन्द्रीय समितिको रप्मा महाधिवेशन आयोजक समितिमा पारिएका २५ सय वढि नेता कार्यकर्तालाई काम दिन पनि नसक्ने र व्यवस्थित रुपमा अगाडि वढाउन पनि नसक्ने अवस्था आएपछि संख्या नै घटाउने गृहकार्यतर्फ माओवादी केन्द्र […]
राजनीतिक दलहरु नै चुनावको पक्षमा नभएको पुर्व निर्वाचन आयुक्त उप्रेतिको आरोप
पर्वत, ८ असोज/ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले राजनीतिक दलहरु नै चुनावको पक्षमा नभएको आरोप लगाउँदै उनले बाँकी १६ महिनाभित्र तीन वटै चुनाव गर्न सकिने भएकाले अब तत्काल ऐन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उप्रेतीले अहिलेकै अवस्थामा कुनै पनि निर्वाचन हुने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। अहिलेकै गतिको तयारीले तीनै तहको निर्वाचन समयमै हुनेमा आशङ्का पैदा […]
एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल भन्छन्-‘संविधान परिमार्जन र संशोधन हुन्छ ‘
काठमाडौं, ८ असोज नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पुर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान शंसोधन हुन नसक्ने बताइरहेका बेला एमालेकै वरिष्ठ नेता एवं पुर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेपालको संविधान शंसोधन र परिमार्जन हुन सक्ने स्पष्ट पारेका छन् । अपुरो र अधुरो रहेको भन्नु गलत भएको बताउदै नेपालले भने संविधानमा सतप्रतिशत सहमति कतै पनि हुम्दैन । बारा काठमाडौ […]
प्रधानमन्त्रीले नर्भेजियन राजदूतलाई के भने ?
असोज ६, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपालका लागि नर्भेजियन राजदूत क्याजेल टोर्मोड पेट्टेर्सेनबीच भेट बार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्रीले नेपालले संविधानको कार्यान्वयन, भूकम्पको पूनर्निर्माण र समृद्धिका लागि द्रुत गतिमा काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै नेपालको विकासका लागि नर्भेले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले नेपालले […]
के पी ओलीले जनतालाई यसरी ढाँटे
प्रधानमनत्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भर्खरै गर्नुभएको भारतको राजकीय भ्रमणका दौरान भएको २५ बुँदे वक्तव्यको विषयमा नेकपा एमालेले केही प्रश्न उठाउँदै देशव्इापी आतंक सिर्जना गरिरहेको छ । प्रचण्डले भारत भ्रमणमा देशै बेच्ने सम्झौता गरेको झैं गरैर ओली मार्काले जसरी देश व्इपाी प्रचार अभियान र आतंक सिर्जना गरिरहेको छ यसको पछाडि के […]
Posted in अन्तरवार्ता / बिचार,एक्सक्लुसिभ समाचार Read More »
उपराष्ट्रपति पासाङ स्वदेश फिर्ता, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरे स्वागत
काठमाडौं, असोज ५ । उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुन ‘पासाङ’ भेनेजुएलाबाट स्वदेश फर्केका छन् । असंलग्न राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलनमा भाग लिन उनी गत भदौ २९ गते भेनेजुएला गएका थिए । उपराष्ट्रपति पुनलाई प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिमानस्थनमा स्वागत गरेका थिए। भ्रमणका क्रममा उपराष्ट्रपति पुनले बिभिन्न राष्ट्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसंग साईडलाईन वार्ता गरेका जानकारी दिएका थिए । […]
गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति नदिने -प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
असोज ५, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियाको सफल समापनसँगै विकास र समृद्धिले गति पैदा गर्ने बताएका छन् । आज शान्ति तथा पूनर्निर्माण मन्त्रालयद्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक ढङ्गले सुरुवात गरियो । सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण काम सहज र मौलिक ढङ्गले निष्कर्षमा […]
Posted in एक्सक्लुसिभ समाचार,राजनीति मुख्य Read More »
Page 327 of 411« First«...102030...325326327328329...340350360...»Last »